Ikhaya » izithuba » Inqaku elibonisa » Umdibaniso weNdlovu ye-Afrika (i-AEC): eJapan intengiso yakho yeendlovu!
Iindaba zokuhamba eBenin • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Umdibaniso weNdlovu ye-Afrika (i-AEC): eJapan intengiso yakho yeendlovu!
IBhunga laBadala boMdibaniso weNdlovu ye-Afrika (i-AEC) enamazwe angama-32 ase-Afrika kwaye uninzi lwamazwe eendlovu zaseAfrika licela urhulumente waseJapan ukuba avale imakethi yakhe yeendlovu, phakathi kwezona zinkulu ehlabathini, kwaye axhase ukhuseleko olomeleleyo lweendlovu zaseAfrika.
Sibiza iJapan ukuba ilandele umzekelo weTshayina kwaye ivale imarike yayo yasekhaya yendlovu. Siyakholelwa ekubeni ukwenza njalo kuyakuqinisa umfanekiso wolondolozo lwamazwe e-Japan phambi kwee-Olimpiki zika-2020 ”, utshilo u-Azizou El Hadj Issa, uSihlalo weBhunga laBadala le-AEC, kwisibheno kuTaro Kono, umphathiswa wezangaphandle waseJapan ukuba axhase uManyano.
IBhunga laBadala le-AEC libhalele uMphathiswa Wezangaphandle eJapan, uTaro Kono, ecela uncedo kunye nentsebenziswano ukomeleza amanyathelo aphesheya ekunciphiseni ibango lendlovu "ukuze amabamba endlovu angabi zizinto ezinqwenelekayo".
I-AEC ingenise amaxwebhu ali-18th INkomfa yamaQela yeNgqungquthela yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kwiZilwanyana nezilwanyana ezisengozini yokuCinywa (CITES) kwaye icela iJapan ukuba ixhase izindululo zokuqinisa ukhuseleko lweendlovu.
Ngokukodwa, i-AEC ifuna:
Onke amazwe alandela umzekelo waseTshayina ngokuvala iimarike zabo zasekhaya zendlovu ngokuqinisa isisombululo (10.10) kwiNkomfa yamaQela.
Ukudwelisa zonke iindlovu zaseAfrika ukuya Isihlomelo I, olona khuseleko luqinisekileyo phantsi kweCITES Okwangoku, iindlovu eAfrika zahlulwe zadweliswa kunye neendlovu eBotswana, eNamibia, eMzantsi Afrika naseZimbabwe ISihlomelo II, evumela urhwebo phantsi kweemeko ezithile.
I-AEC kudala inembono yokuba ukuba iindlovu kufuneka zikhuselwe ngokupheleleyo kunyanzelekile ukuba zonke zidweliswe kwisiHlomelo I. Uluhlu lokwahlulahlula lukhokelele ekudidekeni kwimfuno yabathengi kwaye kukhokelele kurhwebo oluqhubekayo lwendlovu. inyuke emva kokuthengiswa koovimba bendlovu ukusuka emazantsi e-Afrika ukuya e-China nase-Japan ngo-2008. I-China ivale imakethi yayo ngo-2017, kodwa imakethi yeempondo zendlovu yaseJapan iseyeyona inkulu ehlabathini, kwaye bukhona ubungqina obubambekayo ukuba iindlovu ezivela eJapan zithunyelwa eChina ngokungekho mthethweni ngezixa ezibalulekileyo, kujongela phantsi ukuvalwa komsebenzi.
Umdibaniso ukhuthaza intengiso ebalulekileyo yasekhaya yeendlovu - ngakumbi ezo zaseJapan kunye neManyano yaseYurophu- ukuba zilandele umzekelo wase China. Ileta eya Umphathiswa uKono Ibongoza iJapan ukuba ivale imakethi yayo yendlovu, kwaye ikhutshelwe ku-Mphathiswa Wezendalo, Yoshiaki Harada, Kunye noQoqosho, uRhwebo noShishino, UHiroshige Seko, bobabini banoxanduva lokwenza umgaqo-nkqubo kurhwebo lwendlovu, ukulawula urhwebo lwendlovu lwasekhaya kunye nokuphunyezwa kwesisombululo esimalunga ne-CITES (10.10) eJapan. IBhunga likholelwa ekubeni ukuvala imarike yalo yophondo lwendlovu “kuyakuqinisa umfanekiso wolondolozo lwamazwe waseJapan ngaphambi kwe-Olimpiki yowama-2020 neParalympics”.
Sihlalo weBhunga laBadala, UAzizou El Hadj IssaUkwabhalele uMphathiswa Wezangaphandle wase-China, Wang Yi, evakalisa umbulelo kumgaqo-nkqubo wase China "wolondolozo lwembali ekuvalweni kwemakethi yasekhaya yendlovu phantsi kobunkokheli buka-Mongameli Xi Jingping", kwaye wacela i-China ukuba ixhase izindululo ze-AEC.
Iileta eziya kuwo omabini la mazwe zikhankanya i kutshanje kukhishwa Ingxelo yoVavanyo lweHlabathi kwiNkonzo yeNdalo kunye neNkqubo yeNdalo, egxininisa ukungxamiseka kokukhusela iintlobo ezisemngciphekweni njengendlovu. Ingxelo ifumanise ukuba ukuxhaphazwa kweendlovu kurhwebo kukhawulezisa ukuphela kwazo. IBhunga laBadala le-AEC lilumkisa ukuba i-CITES ukuza kuthi ga ngoku aziziphumelelanga iindlovu zaseAfrika, olona phawu lwesi siVumelwano.
Zombini iileta zigxininisa ukuba i-AEC imele ilizwi elimanyeneyo lesininzi seendlovu zaseAfrika kwaye ihambelana nemvakalelo yoluntu jikelele kunye nososayensi abaninzi beendlovu. Amazwe ambalwa ase-Afrika akhokelwa ngeBotswana - usafuna ukuxhaphaza iindlovu ngeendlovu zazo. Nangona kunjalo, injongo yoMbutho wamazwe angama-32 kukugcina iindlovu ezinamandla nezisempilweni zingenazisongelo kurhwebo lwendlovu lwamazwe aphesheya.